कांग्रेस र लोकतन्त्रको भविष्य « CANDOR
« The Treaty of Segowlee/सुगौली सन्धि
Indo-Nepal Treaty 1950 »
कांग्रेस र लोकतन्त्रको भविष्य
Posted by Thaneshwar on मार्च 5, 2008
नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाको आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेसको अग्रणि भुमिका रहेको कुरामात् कसैको २ मत छैन । त्यसैगरि प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास हुन नसक्नुमा पनि काग्रेसकै प्रमुख भुमिका रहेकोछ । २०४६ साल पछिको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले प्रजातन्त्रलाइ संस्थागत र सुदृढ गर्दै आफुलाइ आर्थीक क्रान्तिमा केन्द्रित गर्नु पर्थ्यो। विधिको शाशन स्थापना गर्न तर्फ विशेष ध्यान जानु पर्दथ्यो। सामाजिक कुरीति र अन्धविश्वासमा आधारित विवेधकारि धार्मिक-सामाजिक संस्कारको अन्त्य गर्दै समनातामा आधारित समाजको निर्माण गर्न अग्रसर हुनु पर्दथ्यो। जातिय, धार्मिक, भौगोलिक रुपमा पिछडिएका वर्गको उत्थान एवं अल्पसंख्यकहरुको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनु पर्दथ्यो। ‍ तर दुर्भाग्य कांग्रेस नेतृत्व आफ्ना सिद्दान्त, आदर्श र कर्तव्य बाट पूण रुपमा विचलित बनि आन्तरिक झगडा र सत्तासुखको दुरुपयोग गर्नमानै केन्द्रित रह्यो। जस्ले गर्दा माओवादि हिंसाले प्रशय पायो। विदेशि अनुदान र ऋण सहयोगमै भएपनि निर्माण भएका संरचनाहरु विद्रोहि द्वारा ध्वस्त गरिए। १३ हजार नेपालिले ज्यान गुमाए । हजारौंको संख्यामा अंगभंग भए । हजारौं नेपालि चेली विधवा बने। हजारौं बालबालिका टुहुरा बने। शिशु प्रजातन्त्रले असामायिक मृत्यूवरण गर्न पुग्यो। देश दसौं वर्ष पछाडि पर्यो। कांग्रेसले समयामानै विद्दता, इमान्दारिता र दुर्दशिता प्रर्दशन गर्न सकेको भए देशले अहिलेसम्ममा धेरै कांचुलि फेरिसकेको हुनेथियो।
दोस्रो जनआन्दोलनमा नेपाली कांग्रेस लगायतका अन्य संसदवादीदलहरुले आफ्ना विगतका कमिकमजोरि सच्यायर जाने र विगतका गल्ति पु:न नदोर्याउने प्रण गरेका थिए । शान्ति स्थापनको व्यग्र प्रतिक्षामा रहेका नेपालिहरुले राजनैतिक दलहरुको प्रणलाई विश्वास गर्दै जनआन्दोलनमा होमिय । महत्वकांक्षी राजा ज्ञ्यानेन्द्रले जनताको शक्ति सामु घुंडा टेके र जनताको नासो जनतालाइनै फिर्ता गर्न वाध्य भए। तर दुर्भाग्यको कुरा कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान गतिविधिले के देखाएको छ भने कांग्रेसले अझै पनि चेतेको छैन। यसका गतिविधि हेर्दा के कुरा प्रष्त हुन्छ भने दवाव र वाध्यताको स्थितिमा वाहेक कांग्रेस जनता प्रति उत्तरदायि र लोकतन्त्रको भविष्य प्रति चिन्तित छैन। जुन नेपाल, नेपाली जनता, नेपाली कांग्रेस र समस्त प्रजातन्त्रवादिहरुका लागि दु:खको कुरा हो ।
राजनैतिक पार्टी भनेको एक समुन्द्र हो। पक्कैपनि एक जिवित पार्टी भित्र बिभिन्न स्वार्थ बोकेका मान्छेहरु घुसपैठ गर्न सक्छन। तर पार्टी नेतृत्व भनेको पार्टीको सिद्दान्त र आदर्शलाइ व्यवहारिक रुपदिन सक्ने व्यक्तिको अधिनमा हुनु पर्दछ। प्रजातन्त्रिक पार्टीको नाताले पार्टी भित्र आन्तरिक प्रजातन्त्र संस्थागत रुपमा स्थापित हुनु पर्दछ। नेता-कार्याकर्ता सबैमा प्रजातान्त्रिक आचरण र व्यवहार हुनु पर्दछ। पार्टीको आदर्श, सिद्दान्त र अनुशाशनको पुण पालना गर्नु पर्यो। विधिको शाशन स्थापना एवं पालना गर्नु पर्यो । प्रजातन्त्रका हिमायतिमै प्रजातन्त्रिक व्यवहार र संस्कार नभए पछि प्रजातन्त्र कसरि सुदृढ हुन्छ? नेपाली काग्रेस भित्र नेताको परिवार भित्रको वा नजिकको व्यक्तिले जेसुकै गरोस वा केहि पनि योगदाननै नभएको किन नहोस उसको प्रमोशन भैनै राख्छ तर इमान्दार नेता तथा कार्यकर्ताहरु संधै बलिको बोका बनाइन्छन। विधि, प्रक्रिया, योगदान, क्षमता, मुल्य मान्यता केसैको पनि कुनै स्थान छैन कांग्रेस पार्टी भित्र ! यहि देखाउंदैन त नेपालि प्रजातन्त्रको लडाइमा केहि भुमिकै नभएकि भ्रष्ट सुजाता कोइरालालाइ छांया प्रधानमन्त्रि बनाउने र प्रजातन्त्र र नेपाली कांग्रेसलाइ कलंकित बनाउने भ्रष्ट चिरन्जिवि वाग्ले, गोविन्दराज जोशिहरुलाइ पु:न संबिधान बनाउने जस्तो पवित्र कार्यमा कांग्रेसको प्रतिनिधि बनाउने कामले ? के नेपाली कांग्रेस पार्टी भित्र सुजता, वाग्ले र जोशिहरु भन्दा इमान्दार र सक्षम अरु कोहि नेता छैननत ? के दोस्रो जन-आन्दोलन यिनै भ्रष्टहरुलाई शक्तिमा पुर्याउन भएको थियो ? यी भिडियोहरु हेरौं त एकपटक !
This entry was posted on मार्च 5, 2008 at 10:50 बिहान	and is filed under Politics. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.